“စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသောဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း” | Real Conversion
၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“လူသည် ဤစင်္ကြဝဋ္ဌာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း”
လူပေါင်းမြောက်များစွာကို အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သော 'Tiananmen square massacre? တီရာနန်ဗန်စရီးယား နှစ်ဆယ့်နှစ်ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို ၂၀၁၁၊ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ခြောက်ပတ်ကြာ လွတ်လပ်စွာတွေး ခေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် တရုတ်ကျောင်းသူ^သားများ ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေကြသော ကျောင်းသူ^ ကျောင်းသား များအား အစိုးရလက်နက်ကိုင်များက ပစ်သတ်ခဲ့သောကြောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာ အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါသည်။ Pennsylvania တက္ကသိုလ်၌ ပညာဆည်းဖူးနေသော Exchange ကျောင်းသားဟောင်းယုစီသည် ပေကျင်းမြို့၌ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို တီဗွီဖန်သား၌ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Tiananmen စကွီးယား၌ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုက ကျွန်ုပ်အား နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအတတ်နှင့် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့ မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်နေပြီဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ထိုသူက Tငညေညောနည ၌ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ဖြတ်မှုက လူသားသည် အပြစ်သားဖြစ်၍ ထိုသူတို့အသက်တာ၌ ခရစ်တော်သခင်ကို လိုအပ်နေပြီဟူသော အသိကို တစ်ပါးသူတို့အား သိစေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံသားတို့အား မိမိတို့စိတ်နှလုံးသားကို ပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းကို ဘုရားသခင်အသုံးပြုနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။” (World Magazine, June 6, 2009, p. 38).
“လူတိုင်းအတွက်ယေရှုရှင်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းတစ်ပိုဒ်ကို သီဆိုသည်။
လူတိုင်းအတွက်ယေရှု၊ နေ့ရက်အချိန်နာရီတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်ရှင်
လူတိုင်းအတွက်ယေရှု၊ နေ့ရက်အချိန်နာရီတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်
(၁၈၁၀-၁၈၈၃၊ မေရီဒီဂျိမ်းသီကုံးသော လူတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်)။
World Magazine မဂ္ဂဇင်းပြောကြားသည်မှာ၊
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၀ အတောအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ တိုးတက်လာနှုန်းသည် မြန်ဆန်နေပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောကြားရာတွင် မြို့ပြလူများစွာတို့နှင့် အတွေးအခေါ်မြင့်မားသော အသိပညာရှင်များသည် ခရစ်တော်ကို ဖက်တွယ်နေကြပြီ။ ဥMF နိုင်ငံတကာ(ပြည်တွင်းသာသနာပြု)အဖွဲ့က ခန့်မှန်းသန်း(၇၀) လောက် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်များရှိမည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းက ၁၉၄၉ ခုနှစ်၌ ဏမသအနျအညေအ ခရစ်ယာန်များတရုတ်နိုင်ငံတွင် (၁)သန်းနီးပါးရှိလိမ့်မည်ဟု ပြောကြ သည်။ (ကွန်မြူနစ်ပါတီအုပ်စိုးစဉ်က) (ibid.)
စာရင်းအင်းပါရဂူ၊ ဒေါက်တာ ကေကန်က ယခုအချိန်တွင် တစ်နာရီလျှင် လူပေါင်း ၇၀၀ လောက် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ပြောင်းလဲနေသည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။ တရက်မှာ ၂၄နာရီရှိတယ်။ “အားလုံးအတွက်ယေရှုရှင်”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို နောက်တစ်ခါသီဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခရစ်ယာန်သမိုင်းကို နေရာတကာ၌ ရှိသောခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများလည်း စိတ်ဝင် တစားရှိသင့်ပါသည်။ ၁၇၈၂-၁၈၃၄ ခုနှစ်တွင် ခေတ်မီသော သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို ရောဘတ်မောရီက စတင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၀၇-ခုနှစ်တွင် မောရီဆန်ကို လန်ဒန်သာသနာပြုအသင်းစုမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သာသနာ စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဝီလျှံမီလ်နီက တရုတ်ဘာသာ စကားဖြင့် ကျမ်းစာဘာသာပြန်ထုတ်ဝေရန် ကူညီခဲ့ပါသည်။ သူ့အသက်တာကို တရုတ်နိုင်ငံ၌ (၂၇)နှစ်တိုင် နှစ်မြှပ်ခဲ့သောအခါ အနည်းငယ်သောသူတို့သာ နှစ်ခြင်းခံယူကြပါသည်။ ထိုသူတို့အထဲက အချို့သူတို့သည် သစ္စာရှိရှိ ယနေ့တိုင်ရှိနေကြသေးပါသည်။ မောရိဆန်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ဆိုပေးသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း စာအုပ်စာပေများ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နလညေါနူငခal ဃ့မငျအငညေ အခြေခံ အုတ်မြစ်ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
၁၈၅၃ ခုနှစ်တွင် ဆေးဆရာဝန်၊ ဟန်ဆန်တေလသည် သင်္ဘောဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ လာသည်။ ၁၈၆၀ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းခရစ်ယာန်သာသနာကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာ ခရစ်ယာန် မိတ်သဟာရကိုလည်း စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တေလာ၏ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှုသည် ပြည်တွင်း တစ်လျှောက်လုံး ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါသည်။ ၁၈၀၅ခုနှစ်တွင် ဟန်ဆန်တေလာသည် ချာန်ချမြို့၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ ပါသည်။
၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင် ဂျွန်ဆုန်းမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ သူသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်သမိုင်း၌ ကျော်ကြားသော “ဧဝံဂေလိဆရာတစ်ပါး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ကွန်မြူနစ်ပါတီအုပ်စိုးသော ကာလသည့်တိုင် ထိုဆရာအားဖြင့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဟောကြား၍ ပြောင်းလဲသူများ သစ္စာရှိရှိ သက်ရှိထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ ခေတ်သစ် ခရစ်ယာန်သမိုင်း၌ လွန်ခဲ့သော နှစ်(၆၀)လောက်ကတည်းက တရုတ် နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲတိုးပွားလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဒီကနေ့မနက် မှတ်လောက်သားလောက်သော ဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း၏ ဘ၀သမိုင်းကို သင်တို့အား ပြောပြ သက်သေခံ ပါမည်။ ဒေါက်တာအလ်ဂျင်အက်စ်မောရာ၊ တင်ပြစုစည်းထားသော ထိုဆရာ၏ ဘ၀သမိုင်း အကြောင်းနှင့် စတင်ပါမည်။
၁၉၀၁-၁၉၄၄ ခုနှစ်ကြား အသက်ရှင်ခဲ့သော ပြည်တွင်းနာမည်ကျော် ဧဝံဂေလိဆရာ ဂျွန်ဆုန်းကို တရုတ်နိုင်ငံ ဟိန်းဟားဖူကီယာ၌ မက်သဒစ်သင်းအုပ်ဆရာမှ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ (သူသည် အသက် (၉)နှစ်အရွယ်တွင် လွဲမှားစွာအသက်တာပြောင်းလဲသူဖြစ်သည်)။ ထိုသူသည် ထက်မြတ်သော ကျောင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် ဝေစလီယံတက္ကသိုလ်၌၎င်း၊ အိုဟိုက်အိုတက္ကသိုလ်တွင်၎င်း၊ Uညငသည Thနသူသါငခal Sနာငညမေပ တွင်၎င်း ပညာတော်ကို သင်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ဏ့.D ဘွဲ့ကို ရယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လာပြီး သိပ္ပံပညာကို သင်ကြားပေးမည့်အစား ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို သက်သေခံဝေငှခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ဩဇာတန်ခိုးရှိရှိ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းကို တရုတ်နိုင်ငံတစ်လျှောက် (၁၅)နှစ်တိုင်တိုင် သက်သေခံဝေငှခဲ့သူဖြစ်သည်။
“အားလုံးအတွက်ယေရှုရှင်”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို နောက်တစ်ခါသီဆိုသည်။
ထိုအရာများသည် ဂျွန်ဆုန်း၏ဘ၀တစ်သက်တာ အကျဉ်းချုံးမျှသာဖြစ်သည်။ သူ့ဘ၀ အသေး စိတ်ကို လေ့လာကြပါစို့။ သူသည် အသက်(၉)နှစ်အရွယ်တွင် အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသူ ဖြစ်မည်ဟုမထင်ပါ။ သူသည် (၁၉၂၇)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ အသက်(၂၆)နှစ်အရွယ်တွင် အသစ်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲသူဖြစ်မည်ဟု မထင်ပါ။
သူကိုယ်တိုင် ဝန်ခံပြောကြားသည်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဝိညာဉ်ရေးရာအကြပ်အတည်း ကာလနှစ်များစွာအထိ အသက်တာမပြောင်းလဲသေးဟု ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သူ့အသက် (၉)နှစ်အရွယ် တွင် ဟိန်းဟွာမြို့၌ ဝိညာဉ်နိုးထမှု ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအသက်တာအတွင်း၌ လူပေါင်း(၃၀၀၀)ထောင်လောက် ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာ မြည်းစမ်းသူရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်နေ့သောအခါ ထိုသူသည် Gသသိ Fမငိပေ မနက်ခင်းဆုတောင်းအစီအစဉ်၌ “ယေရှုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင်” ဟူသော တရားဒေသနာကို ကြားနာခဲ့သည်။ တရားဟောဆရာကြီးက ‘“တပည့်တော်များ ဆုတောင်းမနေပဲ အိပ်ပျော် နေကြခြင်းနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းသော ယေရှုအကြောင်းကိုယှဉ်ပြီး တရားဟောကြားခဲ့သည်။ တရားဒေသနာနိဂုံးချုပ်သောအခါ အချို့သောယုံကြည်သူများ ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ငိုကြွေးနေသော သူတို့အထဲတွင် (၉)နှစ်သားအရွယ် မက်သဒစ်သင်းအုပ်ဆရာ၏သား ဂျွန်ဆုန်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည် ထိုအချိန်တွင် စစ်မှန်စွာအသက်တာမပြောင်းလဲသော်လည်း မိမိ၏အသက်တာကို ခရစ်တော် သခင်ထံ “ဆက်ကပ်အပ်နှံ” မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်ဦးဆရာ ဒေါက်တာ တိမောသေလင်း (သင်းအုပ်ဆရာအား) ကဲ့သိုဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဂျွန်ဆုန်းသည် အသက်(၁၃) နှစ်အရွယ်တွင် ဖခင်ကြီး၏ ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ကူညီ၍ ဧဝံဂေလိတရား စတင်ဟောကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာလင်းသည် စစ်မှန်စွာမပြောင်းလဲခင်ကကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ဂျွန်ဆုန်းသည် စာကြိုးkစားသောကြောင့် အထက်တန်းစာမေးပွဲကို ရမှတ်အမြင့်ဆုံးဖြင့် အောင်မြင်သူ ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် သူသည် “တရားဟောဆရာလေး” ဟူ၍ လူသိရှင်ကြား ထင်ရှားနေလေပြီ။ ဇွဲလုံ့လဝိရိယရှိရှိ ကြိုးစားလုပ်ဆောင် စေသော်လည်း သူ့နှလုံးသားသည် မပြည့်စုံသေးပေ။
၁၉၁၉ ခုနှစ်၊ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်တွင် ဂျွန်ဆုန်းသည် အမေရိကားသို့ ပညာတော်သင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သဖြင့် အိုဟိုင်းအိုဝီစလီတက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်တော်သင်ခွင့် အခမဲ့ဖြင့် တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဆေးပညာရပ်နှင့် ကျမ်းစာဆိုင်ရာ ဓမ္မပညာရပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင် ဓမ္မပညာရပ်ကို ချန်ထား၍ သင်္ချာဆိုင်ရာဘာသာရပ်နှင့် ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ပညာရပ်ကို အထူးပြု ဘာသာအဖြစ် လေ့လာသင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ဘုရားကျောင်းသို့ ပုံမှန်သွားလေ့ ရှိပြီး ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများအသင်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏ပညာရေး နောက်ဆုံးစာမေးပွဲအတွက် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာမှု မရှိတော့သဖြင့် သူ့ကို နောက်ဆုံးစာမေးပွဲက လှည့်ဖြားနေတော့သည်။ သူသည် (၁၉၂၃)ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဃကာ Lကေိန ဖြစ်သည်။ ဃကာ Lကေိန သည် ကျောင်းသား သုံးရာထဲမှ အတန်းခေါင်းဆောင် လေးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဓါတုဗေဒဘာသာရပ်နှင့် ရူပဗေဒဘာသာရပ်၌ ဆုတံဆိပ်နှင့် ဆုကြေးများစွာ ရရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် အ့န ဏ့င နြအa Kစေစa တက္ကသိုလ်များ ယောကျားအသင်း၊ ပညာရှင်အသင်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဆောင်နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသည်။ ရွှေသော့တံဆိပ်ဆု၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပညာတော်သင်ဆု အပ်နှင်းခံရသောသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
သူသည် ဟားဗက်တက္ကသိုလ်အပါအဝင် များစွာသောတက္ကသိုလ်များအတွက် ပညာသင်စရိတ် လှူဒါန်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ အိုဟိုင်အိုပြည်နယ် တက္ကသိုလ်၌ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့အတွက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် ၎င်းဘွဲ့လွန်အတွက် (၉)လသာ အချိန် ကြာခဲ့သည်။ သူသည် ဟားဗက်တက္ကသိုလ်၌ ဆေးပညာသင်ကြားရန် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို လှူဒါန်းခဲ့ ပါသည်။ သူသည် ဓမ္မကျမ်းစာတော်သင်ကြားရေးအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကိုလည်း လှူဒါန်း ခဲ့ပါသေးသည်။ သူသည် ဓမ္မဗေဒကို သင်ယူမည့်အစား ကျော်စောတိတိုဖြစ်လိုမှုကို သူ၏ ခရစ်ယာန်အမှုတော် ဖြစ်လိုသော ဆန္ဒကို တုံးစေခဲ့ပြီး အမှုတော်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်လာမည့်အစား အိုဟိုင်အိုပြည်နယ် တက္ကသိုလ်၌ ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုသာ လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဏ့.D ၊ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ သူသည် နှစ်ဆယ့်တစ်လအကြာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ဏ့.D ၊ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ဆွတ်ခူးသော တရူတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ သူသည် သတင်းစာ ထဲ၌ အိုဟိုင်အိုတက္ကသိုလ်မှ အကျော်ကြားဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ သို့သော် နှလုံးသားအတွင်းဆုံးနေရာတွင် ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပေ။ ဝိညာဉ်နားခိုရာ ကင်းမဲ့၍ အသက်ရှင်ခဲ့ သောကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သာ ကာလရှည်ကြာအသက်ရှင်ခဲ့ရသည်။ (Lyall, ibid., p. 22) ?
ဤအချိန်တွင်သူသည် အတွေးအခေါ်”ဓမ္မဗေဒနှင့် သူတို့၏သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သော ‘“လူမှုရေး ဧဝံဂေလိ” ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက် ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ အတွေးအခေါ်ဓမ္မဗေဒပညာရှင်များက “ယေရှုသည်မြင့်မြတ်သောသူမဟုတ်၊ ကယ်တင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဟူ၍ သွန်သင်ခဲ့ကြ၏။ သူသည် အသက်(၉)နှစ်အရွယ်တွင် ယေရှုဘုရားသည် မြင့်မြတ်သောသူဖြစ်သည်ဟု ခံယူသူဖြစ်၍ ဤအချိန်တွင် ထိုအတွေးအခေါ်များက သူ့အား “လွဲမှားသောပြောင်းလဲသူ” ဖြစ်စေခဲ့ပြီး။ သို့ပါသော်လည်း ဘုရားရှင်က သူ့အား ခေါ်နေမြဲခေါ်ဆဲဖြစ်သည်။ “လူသည် ဤစင်္ကြာဝဋ္ဌာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက် ဝိညာဉ် ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။ ဟူသောဘုရားရှင်၏အသံကို တစ်ကိုယ်ထဲ ထိုင်နေစဉ် ကြားရမည် ထင်ပါ၏။
နောက်တစ်နေ့တွင် Lငဘနမal မက်သဒစ်ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ သူသည် အမေရိကား၌ ဓမ္မဗေဒပညာရပ်ကို သင်ကြားဖို့ရန် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့၏။ ထိုပညာရှင်က နယူးယောက်မြို့တော် Union Theological Seminary ၌လဘာသာရေးလေ့လာ ဆည်းပူးရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သူသည် ခဏတဖြုတ် ထိုကျောင်းသို့သွားဖို့ရန် တုံးဆိုင်ခဲ့သည်။ ထို ဓမ္မကျောင်းတော်တွင် ပညာသင်စရိတ် အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးပြီး အသုံးစရိတ်ပါ လုံလုံလောက်လောက် ပေးခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် သာသနာပြုသွားရန် စိတ်မဝင်စားတော့ပဲ သူ့အဖေအား စိတ်ကျေနပ်စေဖို့အတွက် တစ်နှစ်လောက်ဓမ္မပညာကို သင်ကြားလိုခဲ့သည်။ ပြီးနောက် သူ၏သိပ္ပံ အတတ်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ရသည်။ သူ၏စိတ်နှလုံးသည် ရှုပ်ထွေးပြီး မည်းမှောင် နေပေပြီ။
၁၉၂၆ ခုနှစ် ဆောင်းဦးရာသီတွင် ဂျွန်ဆုန်းသည် Uညငသည Thနသူသါငခal Sနာငညမေပ ၌ ဓမ္မပညာကို လေ့လာဆည်းဖူးခဲ့ပါသည်။ အစွန်းရောက်အတွေးခေါ်သမား ဒေါက်တာဟင်နရီဆလွန်း ကော့ဖင်သည် ထိုကျောင်းတွင် အလှည့်ကျကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာဟန်နရီအမာ ဆင်ဖေါ့ဒစ်သည်လည်း ဗဟိုအမာခံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ‘“The Modern use of the Bible‘“နှင့် The Manhood of the Master ဟူသော Fundamentalism က ကိုဆန့်ကျင်သောစာအုပ်များစွာ အရေးသားသော စာရေးဆရာလည်းဖြစ်သည်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော Fသျိငခု ၏ ပို့ချချက်မှာ Fundamentalist တို့က အောင်မြင်အနိုင်ယူမှာလား၊ (1922) ဟူ၍ ပို့ချခဲ့သည်။ ထိုသူက ခရစ်တော်ဘုရား ကိုယ်ခန္ဓာတော်အားဖြင့် ထမြောက်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာသည် ပြီးပြည့်စုံသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဆိုသောအချက်ကို ဆန့်ကျင်တရားကို ရေဒီယို၌ အသံလွင့်သူဖြစ်သည်။ ထိုကျောင်း တော်ကြီးသည် ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာ ဓမ္မငြင်းပယ်သောကျောင်းနှင့် သမ္မာကျမ်းစာကို ဝေဖန်သော ကျောင်းတော် ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ သည် သိပ္ပံနည်းလမ်းအရ စမ်းသပ်၍ မရသဖြင့် ယုံကြည်ရန်လုံလောက်မှုမရှိ မယုံကြည်စေနိုင်ဟူ၏။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းသည်လည်း သမိုင်းအထောက် အထားမရှိ၊ သိပ္ပံနည်းအရ အထောက်အထားမရှိဟူ၏။ ယေရှုဘုရားသည်လည်း စိတ်ကူးယဉ် ဆန်ဆန် သာဖြစ်ပြီးပြီး သူအသေခံခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် သေခြင်းမှရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း သည်ကိုလည်း ငြင်းပယ်ထားကြသည်။ ဆုတောင်းခြင်းလည်း အချိန်ကို အလာဟသ ဖြုန်းတီးခြင်း သာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ အမြင်သည် သနားစရာ၊ ရယ်မောစရာပင်ဖြစ်သည်။ (Lyall, ibid ., pp. 29-30).
ဒေါက်တာဆုန်းသည် Lငဘနမal Thနသူသါပ ဘာသာရပ်အသီးသီးကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာသင်ယူ ခဲ့ပါသည်။ သင်ကြားသောဘာသာရပ်၌ အဆင့်မြင့်အောင်မြင်သော်လည်း သူသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ စင်စစ်မှ ဗုဒ္ဓသာသနာတောင်အီဇမ် (Tသေငျာ) သို့ ဦးလှည့်သွားပြီးဖြစ်သည်။ သူသည် စတင်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဂါထာကိုသာ မိမိ၏အခန်းထဲ၌ ရွတ်ဆိုတော့သည်။ မိမိကိုမိမိမုန်းတီးခြင်းက ငြိမ်သက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ခံယူလေပြီ။ သူရေးထားသည်မှာ “ငါ့ဝိညာဉ်သည် သဲကန္တာရထဲ၌ သွားလာနေ သည်”ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။
သူ၏ စိတ်အထင်မှာ ၊ သူ၏အတန်းဖော်တရုတ်အမျိုးသားက သူလက်ထပ်ရန်ကတိပြုထားသော တရုတ်နိုင်ငံသူနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပေးမည်ကို စိုးရိမ်နေသည်။ သူ၏အသက်တာသည်လည်း သည်းခံစိတ်ရှည်ခြင်း မရှိတော့ပြီ။ သူရေးသားထားသည်မှာ “ကျွန်ုပ်သည် စားမဝင် အိပ်မပျော်တော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ခံစားချက်၌လည်း ပျော်ရွှင်ခြင်းဟူ၍ မရှိပြီ။” ဟု ရေးသားခဲ့ပါသည်။ ထိုကျောင်းတော် ရုံးဝန်ထမ်းများက ထိုသူ၏ စိတ်ညိုးငယ်ခြင်းအကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည်။
The Fundamentalist ပထမနှစ်ခြင်းအသင်းတော် သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာအိုင်.အမ်. Haldနာညေ ၏ တရားဒေသနာတော်ကိုနားထောင်ရန် နယူးယေက်မြို့သို့ သူ့အပေါင်းအဖော်များနှင့် တရားဒေသနာနားထောင်ရန် သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဟတ်ဒမန်သည် “အပျိုကညာမှ မွေးဖွားခြင်းကို ငြင်းပယ်ပါက ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။”ဟူ၍ ပြောကြားကျော်ကြားသော ဆရာတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာဟတ်ဒမန်သည် ဟန်နီဧမာဆန်နှင့် Uညငသည Thနသူသါငခal Sနာငညမေပ ကို ဆန့်ကျင်သောဆရာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ဂျွန်ဆုန်းသည်လည်း ထိုဆရာဟောကြားသော တရားဒေသနာကို နားထောင်လိုစိတ် ပြင်းပြလျှက်ရှိသည်။ သို့သော် ထိုနေ့ညတွင် ဒေါက်တာဟတ်ဒမန်က ထိုဒေသနာကို မဟောဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အမျိုးသမီး ၁၅ နှစ်ခန့် အရွယ်တစ်ဦးက သူ့အား သက်သေခံဝေငှပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးငယ်က သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ကြားပေးပြီး ခရစ်တော်သည် လူသားအားလုံးတို့၏ အဖြစ်အဖိုးအခအတွက် ကားတိုင်ပေါ် အသေခံခဲ့သည်ကို ရှင်းပြပေးခဲ့သည်။ ဂျွန်ဆုန်းကလည်း ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေသည်ဟု ပြန်ပြောကြားလာခဲ့သည်။ ‘ဓမ္မကျမ်းစာကျောင်းမှ အပေါင်းအဖေါ် ဖကော့မ်နှင့် ညနေပိုင်းဧဝံဂေလိတရား ဟောပွဲသို့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို သွားရောက်နားထောင်ခဲ့ပါသည်။
“လူတိုင်းအတွက်ယေရှုရှင်”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို နောက်တစ်ခါသီဆိုသည်။။ြွ
ထိုသူသည် ဂျွန်ဝီစလီ၊ ဂျော့ခ်ျဝိုက်ဖီးလ်ကဲ့သို့သော ခရစ်ယာန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ဖတ်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုနေ့ည ဧဝံဂေလိတရားဟောပွဲ၌ ကြီးမားသောဘုန်းတန်ခိုးတော်ကို ပထမနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော်၌ ခံစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နည်းပြဆရာတစ်ပါးက ခရစ်တော်သည် လူသားတို့အဖို့ လက်ဝါးကားတိုင်တွင် အသေခံသည်ဟူသောအချက်ကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျွန်ဆုန်းသည် အတန်းရှေ့မှ ချက်ချင်းမတ်တတ်ရပ်ကာ ထိုဆရာအား တုန်လှုပ်စေသည့်တိုင် အတန်းရှေ့မှအကောင်းဆုံးပြောကြားပေးလိုက်သည်။
1927 ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် သူသည် စစ်မှန်စွာပြောင်းလဲသူဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ သူ့ဘ၀အသက်တာ ထဲက မိမိ၏အပြစ်များကို သိမြင်ခဲ့ပါပြီ။ ပထမအဆင့်အနေနှင့် မိမိအပြစ်ရှိမှန်းသိသည့်တိုင် မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရန်မသိနားမလည်ပဲ ငရဲသို့ကျပေမည်ဟု သိလာသည်။ သူ့အပြစ်အားလုံးကို မေ့ပစ်ချင်နေသည်။ သို့သော် ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ။ သူသည် ယေရှု၏လက်ဝါးကားနှင့် ပါတ်သက်သော သမ္မာကျမ်းစာ ရှင်လုကာ ၂၃ကို လေ့လာခဲ့၏။ အသွေးတော်အားဖြင့်သာ အပြစ်ကိုဆေးကြောနိုင်ကြောင်း သူ့ကို သူ့ကိုယ်တိုင် ခြေရင်း၌ ရောက်ရှိနေသလို ခံစားပြီး ငိုကြွေးရင်းထိုနေ့ည သန်းခေါင်အချိန်တွင် ဆုတောင်းကာ ခရစ်တော်နှင့်အတူ ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ “ငါ့သား” သင့်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရပါပြီ။ သင့်အပြစ်ကို ယေရှုယူတင်ဆောင်ယူပြီးဖြစ်သည်ဟူသော အသံတော်ကို ကြားနေမည်ထင်ပါသည်။ သူသည်လည်း “ဟာလေလုယာ” ဟူ၍ အောက်လျှက်ခြေလှမ်း မြန်မြန်လှမ်းနေပေမည်။ (Lပall.ငဘငိ ဏဏ ၃၃-၃၄) သူသည် အောက်လျှက်ဘုရားဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကာ အခန်းကျယ်ထဲက ထွက်လာခဲ့ပေမည်။ ဤအချိန်တွင် သူသည် သူ့အတန်းဖော်များ၊ သင်ဆရာများတို့အား သင်တို့သည် ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းတရား လိုအပ်သည် ဟူ၍ ပြောဟောတော့လေ၏။ “လူတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ထပ်မံ၍ သီဆိုသည်။
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကလည်း ဤလူသည် အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့သောသူ စိတ်ရောဂါရှိသောသူ ဖြစ်၍ စိတ္တဇဆေးရုံသို့ ပို့ရမည်ဟု တွေးတောထင်ခဲ့၏။ ထိုစိတ္တဇဆေးရုံ၌ ခြောက်လကြာနေသွားခဲ့ရ၏။ ထိုအတောအတွင်း သူသည် သမ္မာကျမ်းစာကို အစမှအဆုံး အကြိမ်(၄၀)တိုင် ဖတ်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်နေပါသည်။ “စိတ္တဇဆေးရုံသည် ဂျွန်ဆုန်းအတွက် တကယ်မှန်ကန်သော သမ္မာကျမ်းစာကျောင်း ဖြစ်နေခဲ့သည်။” (Lပallယ စ. ၃၈) နောက်စိတ္တဇဆေးရုံမှ ဆင်းသောအခါ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ သူသည် Uညငသည Sနာငညမေပ နှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်၏။ “နတ်ဆိုးများ စာအုပ်”ဟုခေါ်သော ၎င်းကျောင်းက စာအုပ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ Uညငသည Sနာငညမေပ သည် တရုတ်နိုင်ငံဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း နိုးကြားမှုသမိုင်းနှင့် ဘယ်တော့မှ ဆက်စပ်မှု မရှိတော့ပေ။
သင်္ဘောဖြင့် မိမိတိုင်းပြည်ကို အပြန်ခရီး၌ သူအမှန်တကယ်ရလိုက်သော ရာထူးသည် တရုတ် အမျိုးသား တက္ကသိုလ်မှ ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ပါမောက္ခတာဖြစ်သည်ကို သိလိုက်ရ၏။ သင်္ဘောဖြင့် ခရီးရွက်လွင့်သောအခါ ဂျွန်ဆုန်းသည် မိမိအိမ်ခန်းသို့သွားပြီး သေတ္တာကြီးကိုဖွင့်ကာ ရယူထားခဲ့သော ဒီပလိုမာလက်မှတ်များ ဆေးကျောင်းအောင်လက်မှတ်များ ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးကိုပင် လက်ထဲသို့ ပစ်ချလိုက်တော့၏။ ဒေါက်တာလက်မှတ်ကိုမူ ဖခင်အား ကျေနပ်စေဖို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ (Lyall, p. 40).
၁၉၂၇၊ နွေနှောင်းရာသီတွင် ဂျွန်ဆုန်းသည် သင်္ဘောဖြင့် ချန်ဟိုင်းမြို့ကို ရောက်ရှိလာပါသည်။ သူသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခရစ်ယာန်သမိုင်းစဉ် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းပြောကြားရာတွင် ကျော်ကြား လူသိများသော သူဖြစ်သည်။ သူ့ကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဝက်စ်စလေဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဂျွန်ဆုန်းသည် ဧဝံဂေလိတရားဟောရာတွင် ဩဇာအာဏာညောင်းသူ တန်ခိုးပါဝါကြီးသောသူ ဆရာတစ်ပါးဖြစ်သည်။ သုံးနှစ်တာအတွင်း သူ့တရားဟောချက်အားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း (၁၀၀၀၀၀) ခန့် အသစ်သော အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်၎င်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင်လည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်၎င်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနှင့် ဖိလိပိုင်နိုင်ငံတို့၌လည်း ဧဝံဂေလိတရားဟောခဲ့သည်။ သူသည် စကားပြန်နှင့်သာ တရားဟောခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ သူ၏ဘာသာစကားသည် လူနည်းစုဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဝိုက်ဖီးလ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဂျွန်ဆုန်းသည် သူဟောကြားသောတရားစကားကြောင့် ပြောင်းလဲသူ တို့နှင့် လက်ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀ ရာစုနှစ်အတွင်း အရှေ့အရှတခွင်တွင် ထွန်းထွန်း တောက်တောက် ဘုရားရှင်၏ဆုကျေးဇူးခံစားသူဖြစ်ခဲ့၏။ ယနေ့အထိ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်ဝမ်တွင် ဂျွန်ဆုန်းစတင်ခဲ့သော သာသနာများရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ (T. Farak, in J .D. Douglas, Ph.D, Who’s Who in Christian History, Tyndale House, 1992 , p. 650).
ဒေါက်တာဆုန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်ပါတ်သက်၍ သိက္ခာတော်ရ ဝီလျှံအီးစကူးဘတ်က မှတ်တမ်းတင်၊ ခေါင်းစီးတပ်ပေးသည်မှာ၊ “ငါသည် ဂျွန်ဆုန်းကို သတိရသည်” အောက်ပါလိပ်စာကို အသုံးပြု၍ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ www.strategicpress.org. သိက္ခာတော်ရဆရာတော် စကူးဘတ်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာအုပ်ကို ဝယ်လိုပါက၎င်း၊ လိပ်စာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ လက်စလီးလေယာက မှတ်တမ်းတင်ထား သော ဒေါက်တာဂျွန်ဆုန်း၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကို ဝယ်ယူလိုပါက ၎င်းလိပ်စာဖြင့် မှာယူ နိုင်ပါသည်။ “တစ်ချိန်က ပျောက်ဆုံးသွားသောခရီး” ဟူသော ဒေါက်တာဂျွန်းဆုန်း၏ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ကိုလည်း ၎င်းလိပ်စာ၌ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒေါက်တာဆုန်း၏ ရေးသားသော ဆောင်းပါး များကိုလည်း ၎င်းလိပ်စာ၌ မှာယူနိုင်ပါသည်။
သူသည် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ၁၉၄၄ ခုနှစ် အသက် ၄၂ အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။
“လူသည် ဤစင်္ကြဝဋ္ဌာကို အကြွင်းမဲ့အစိုးရ၍ မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလျှင် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း” (ရှင်မာကု ၈း၃၆)၊၊
အကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသည်မှာ မိတ်ဆွေတို့လည်း ဒေါက်ဆုန်းကြုံတွေ့ရသော အတွေ့အကြုံ အထိအတွေ့များ ကြုံတွေ့ရန် ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ ဆုတောင်းနေသည်မှာ မိတ်ဆွေဘ၀ အသက်တာသည် ဗလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်ကို သိနားလည်ပြီး မိတ်ဆွေသည် မိမိသည် အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း နားလည်စေရန် ဘုရားရှင်က သင်မစပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းနေပါသည်။ ဆုတောင်းနေသည်မှာ မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များအား အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ရန် ယေရှုသခင် ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်နိုင်ပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ ဒဒျွှငအ့ Dမ. Sကညါ အေ အ့န Lငဘနမal Sနာငညမေပဓ ကျမ်းစာကျောင်းက ဒေါက်တာဆုန်း” ဟူသော ခေါင်းစဉ်အား ယနေ့ည ၆း၀၀ နာရီတွင် ဆက်လက်ဟောကြားမည်ဖြစ်သောကြောင့် အရောက်လှမ်း လာခဲ့ကြပါ။ အာမင် သီချင်းစာအုပ်ထဲက အမှတ်စဉ်(၃)ကို အားလုံးမတ်တတ်ရပ်လျှက် အတူတကွသီဆိုကြပါစို့၊
“လူတိုင်းအတွက် ယေရှုရှင်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ထပ်မံ၍ သီဆိုသည်။
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာခရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မာကု ၈း၃၄-၃၇ ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိတ်ဖစ်မှ (၁၈၁၉-၁၉၀၄ ခုနှစ်၌ ဝီလျှံစလီဘာသီကုံးသော
“ဒ္ထုတိယမွေးဖွါးခြင်းခံရမည်” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။